Inona ny Arduino? | Fitaovana maimaim-poana
Samy efa nandre momba ny Tetikasa Arduino sy ny vokany tsara ho an'ny tontolon'ny Hardware isika rehetra, fa ny tena marina dia vitsy no mahalala marina izay atao hoe Arduino ary inona no azontsika atao amin'ny tabilao toy izany na izay tena tafiditra ao amin'ny Tetikasa Arduino.
Amin'izao fotoana izao dia tena mora ny mahazo azy tabilao arduino, saingy mila mahafantatra isika ary manana zavatra mihoatra ny takelaka tsotra Hardware izay azo ampifandraisina tariby vitsivitsy sy takamoa LED sasany.
1 Inona izany?
2 Ahoana no nahatonga ny anaranao?
3 Inona no tsy mampitovy azy amin'ny Raspberry Pi?
4 Inona ny maodelin'ny takelaka misy?
5 Inona no ilaintsika hampandeha azy?
6 Tetikasa sasantsasany azontsika atao amin'ny tabilao Arduino
Ny tetikasa Arduino dia hetsika Hardware mitady ny famoronana birao PCB na Printed Circuit izay manampy ny mpampiasa rehetra hamorona sy hamolavola tetikasa elektronika farany sy miasa. Araka izany ny takelaka Ny Arduino dia tsy inona fa ny birao PCB izay azontsika atao averina imbetsaka araka izay tadiavintsika nefa tsy mila mandoa vola. na miankina amin'ny orinasa amin'ny fampiasana sy / na ny famoronana.
Ity hetsika ity (Tetikasa Arduino) dia mikatsaka ny famoronana Hardware Free tanteraka, izany hoe, ny mpampiasa rehetra dia afaka manangana ny tabilaony manokana ary mampandeha tsara azy ireo, farafaharatsiny mba fampiasa toy ireo tabilao azontsika vidiana.
Teraka tamin'ny 2003 ny tetik'asa raha mpianatra maromaro avy amin'ny Ivotoerana IVREA no nitady fomba hafa hanoloana ireo tabilao miaraka amin'ny microcontroller BASIC Stamp. Ireo takelaka ireo dia mitentina mihoatra ny $ 100 isaky ny singa, vidiny lafo ho an'ny mpianatra rehetra. Tamin'ny taona 2003 dia niseho ny fivoarana voalohany izay manana endrika tsy andoavam-bola ary ampahibemaso fa ny mpanara-maso azy tsy mahafapo ny mpampiasa farany. Amin'ny 2005 dia ho tonga ny microcontroller Atmega168, microcontroller izay tsy vitan'ny hoe manome fahefana ny birao fotsiny fa manome ihany koa ny fanamboarana azy, ka mahatratra 5 $ ny maodelin'ny birao Arduino.
Ahoana no nahatonga ny anaranao?
Ny Tetikasa dia nahazo ny anarany avy amin'ny tranombarotra akaikin'ny IVREA Institute. Araka ny efa nolazainay, ny tetik'asa dia teraka tamin'ny hafan'ity andrim-panjakana ity izay any Italia sy akaikin'io andrim-panjakana io dia misy trano fivarotana mpianatra antsoina hoe Bar di Re Arduino na Bar del Rey Arduino. Ho fanajana ity toerana ity, ny mpanorina ny tetikasa, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino ary David Mellis, nanapa-kevitra ny hiantso ny solaitrabe sy ny tetikasa Arduino izy ireo.
Nanomboka tamin'ny taona 2005 ka mandraka ankehitriny, ny Tetikasa Arduino dia tsy niady hevitra momba ny mpitondra sy ny zon'ny fananana. Noho izany, misy anarana isan-karazany toa an'i Genuino, izay marika ofisialin'ny takelaka Project izay namidy tany ivelan'i Etazonia sy Italia.
Inona no tsy mampitovy azy amin'ny Raspberry Pi?
Mpampiasa maro no misafotofoto ny tabilaon'ny Raspberry Pi amin'ny tabilao Arduino. Satria ho an'ireo vao novambra indrindra sy tsy misy ifandraisany amin'ilay lohahevitra dia toa mitovy ireo takelaka roa ireo, saingy tsy misy zavatra lavitra amin'ny fahamarinana. Arduino dia birao PCB misy microcontroller, saingy Tsy manana processeur, tsy misy GPU, tsy misy memoire ram ary tsy misy port output toa ny microhdmi, wifi na Bluetooth izay ahafahantsika mamadika ny solaitrabe ho minicomputer; fa Arduino dia birao azo soratana amin'ny alàlan'ny hoe afaka mitondra programa isika ary ny fitaovana ampiasaina dia hanatanteraka an'io programa io: na zavatra tsotra toy ny famonoana / famonoana jiro LED na zavatra matanjaka toy ny ampahany elektronika an'ny mpanonta 3D.
Inona ny maodelin'ny takelaka misy?
Mizara roa ny tabilaon'ny Tetikasa Arduino, ny sokajy voalohany dia ny tabilao tsotra, ny board PCB microcontroller y ny sokajy faharoa dia ny takelaka ampinga na fanitarana, tabilao izay manampy fampiasa amin'ny solaitrabe Arduino ary miankina aminy amin'ny asany.
Anisan'ireo maodely malaza indrindra amin'ny birao Arduino ny:
Ary anisan'ireo maodely arduino malaza indrindra na mahasoa indrindra ny:
Ny takelaka sy ny ampinga dia ny maodely fototra. Avy eto isika dia hahita kitapo sy kojakoja izay hanana ny tanjon'ny fanaovana Arduino hampivelatra asa manokana kokoa toy ny tetik'asa CloneWars izay mamorona kitapo hanovana ny tabilao MEGA Arduino ho mpanonta 3D mahery.
Inona no ilaintsika hampandeha azy?
Na dia toa tsy mitombina na hafahafa aza izany, raha mila miasa tsara ny birao Arduino dia mila singa roa isika: hery sy rindrambaiko.
Voalohany indrindra dia miharihary fa raha hampiasa singa elektronika isika dia mila angovo azo alaina avy amin'ny loharano herinaratra na mivantana avy amin'ny fitaovana elektronika hafa noho ny fidirana usb.
Handray ilay rindrambaiko izahay amin'ny alàlan'ny IDE Arduino izay hanampy anay hamorona, hanangona ary hizaha ireo programa sy fiasa tianay hananan'ny birao Arduino anay. Arduino IDE dia rindrambaiko maimaimpoana azontsika andalovana ity tranonkala ity. Na dia afaka mampiasa karazana IDE sy rindrambaiko hafa aza izahay, ny marina dia ampirisihina hampiasa Arduino IDE hatrizay Izy io dia manana mifanentana indrindra amin'ireo maodely ofisialin'ny Tetikasa Arduino ary hanampy anay handefa ny angona kaody rehetra tsy misy olana..
Tetikasa sasantsasany azontsika atao amin'ny tabilao Arduino
Ireto ny sasany amin'ireo tetikasa azontsika atao amin'ny takelaka tsotra amin'ity tetik'asa ity (na inona na inona modely safidintsika) ary azon'ny rehetra jerena.
Ny gadget malaza indrindra amin'izy rehetra ary ilay nanome ny tetikasa Arduino ny lazany dia tsy isalasalana Mpanonta 3d, indrindra ny maodely Prusa i3. Ity gadget revolisionera ity dia mifototra amin'ny extruder sy ny Arduino MEGA 2560 board.
Taorian'ny fahombiazan'ity tetikasa ity dia nisy tetikasa roa nifanila nateraka izay dia miorina amin'ny Arduino ary mifandraika amin'ny fanontana 3D. Ny voalohany amin'izy ireo dia scanner zavatra 3D mampiasa lovia Arduino UNO ary ny faharoa dia tetikasa iray izay mampiasa tabilao Arduino hahafahana mamerina mamorona sy mamorona filamentana vaovao ho an'ny mpanonta 3D.
Ny tontolon'ny IoT dia iray amin'ireo zaridaina na faritra misy tetik'asa Arduino marobe. Arduino Yún no maodely tiako indrindra amin'ireo tetik'asa ireo izay manao hidin-trano elektronika, fantsom-pifandraisana, fikajiana tontolo iainana sns ... Raha fintinina, tetezana iray misy eo amin'ny Internet sy ny fitaovana elektronika.
Ity dia famintinana kely ny Tetikasa Arduino sy ny birao Arduino. Famintinana kely izay manome antsika hevitra momba ny inona ireo takelaka ireo, saingy araka ny efa nolazainay, ny fiandohan'izy ireo dia nanomboka tamin'ny 2003 ary nanomboka teo, ireo takelaka Arduino dia nitombo tsy tamin'ny fampisehoana na tamin'ny fahefana ihany fa tamin'ny tetikasa ihany koa, tantara, adihevitra ary zava-misy tsy manam-petra izay mahatonga an'i Arduino ho safidy lehibe ho an'ny tetikasanay Hardware Free na ho an'ny tetikasa mifandraika amin'ny Elektronika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Arduino » Inona ny Arduino?
Mamorona milina arcade anao miaraka amin'ny Raspberry Pi
Inona no fiteny fandaharana hampianarina ny zanako